मनोरंजन – Page2– " कञ्चनजंगा News "
शिशिर भण्डारीले YouTube बाट महिनाको कति कमाउँछन् ? सुनेर सबै चकित परे (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं- काठमाडौं नजिककै जिल्ला धादिङ, बैरेनीका हुन्, कलाकार तथा भिजे शिशिर भण्डारी । बिज्ञान बिषय पढ्न २०६३ सालमा काठमाडौं आएका शिशिर अमृत साईन्स क्याम्पसमा पढ्दै एफ.एम सुन्नमा रुचि राख्न थाले । …
काठमाडौं- काठमाडौं नजिककै जिल्ला धादिङ, बैरेनीका हुन्, कलाकार तथा भिजे शिशिर भण्डारी । बिज्ञान बिषय पढ्न २०६३ सालमा काठमाडौं आएका शिशिर अमृत साईन्स क्याम्पसमा पढ्दै एफ.एम सुन्नमा रुचि राख्न थाले ।
एफ.एमका बिभिन्न कार्यक्रम सुन्ने क्रममा २०६४ सालमा उनले हास्य रेडियो रेडियो अडियोमा जागिर खाए । जागिर खानुपुर्व काठमाडौंमा कति रात आफु भोकै सुतेको शिशिरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । हुन त, शिशिरको परिवार गरिवीमा थिएन तर किन भोकै सुते त शिशिर ? उनको उत्तर थियो, म संग पैसा थिएन र मैले बांच्नका लागि आमा बुवासंग पैसा माग्नु पर्दथ्यो । म संघर्ष बुझ्न चाहन्थें । आफै आफैलाई बचाउन चाहन्थें ।
उनको उक्त कार्यक्रम निकै चर्चित कार्यक्रम हो । उनले हिन्दी गीतमा नेपाली हिरो र नेपाली गीतमा बलिउडका कलाकारलाई नचाउने उक्त कार्यक्रम अझै पनि धेरैले सम्झन्छन् । शिशिर भण्डारीले YouTube बाट महिनाको कति कमाउँछन्..हेर्नुहोस
फेरी र्‍यापर भिटेन माथि ढुङ्गा प्र’हार: हेर्नुहोस
सांगीतिक कार्यक्रमको लागि अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका र्‍यापर समिर घिसिङ (भिटेन)माथि फेरी बोतल प्र’हार भएको छ । साउथ अष्ट्रेलियको एडिलेडमा भएको सांगीतिक कार्यक्रममा उनीमाथि बोतल प्र’हार भएको हो । नयाँ वर्षको अवसरमा …
सांगीतिक कार्यक्रमको लागि अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका र्‍यापर समिर घिसिङ (भिटेन)माथि फेरी बोतल प्र’हार भएको छ । साउथ अष्ट्रेलियको एडिलेडमा भएको सांगीतिक कार्यक्रममा उनीमाथि बोतल प्र’हार भएको हो ।
नयाँ वर्षको अवसरमा भिटेन अष्ट्रेलियाको मुख्य शहरहरु सिड्नी, मेलवर्न, ब्रिजवेन, पर्थ लगायतको ठाउँमा कार्यक्रम सकेर गत हप्ता बिहान एडिलेड पुगेका थिए । भिटेनले सिड्नीस्थित होम बारमा डिसेम्बर २७ मा, मेलवर्नस्थित थेरापी नाइट क्लबमा डिसेम्बर ३० मा, नयाँ वर्षको दिन ब्रिजवेनस्थित भ्याली ड्राइभईनमा, जनवरी ३ मा पर्थमा प्रस्तुती दिएका थिए ।
एडिलेडमा गत हप्ता भएको कार्यक्रममा भिटेन स्टेजमा आउँदा उनीमाथि बोत्तल प्र’हार भएको थियो । त्यसपछि कार्यक्रमस्थल त’नावग्रस्त बनेको थियो । आफूमाथि बोत्तल प्र’हार भएपछि आ’क्रोशित हुदै गा’ली समेत गरे । उनले बोत्तल प्रहार गर्नेलाई कार्यक्रमबाट नै निकाल्नुपर्ने तथा नेपाल फर्काइदिनुपर्ने बताएका थिए ।
भिटेनमाथि भएको यस्तो घ’टना पहिलो पटक भने होइन । उनीमाथि यो भन्दा पनि पहिले पोखरामा यस्तै भएको थियो ।
एजेन्सी– सन् १९८३ मा बलिउडमा आएको फिल्म कुलीले अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई निकै ठूलो सफलता दिलायो । तर, यो फिल्मका कारण अमिताभले जुन समस्या भोगेका छन्, त्यसले उनको जीवनलाई थप समस्यामा धकेल्यो …
एजेन्सी– सन् १९८३ मा बलिउडमा आएको फिल्म कुलीले अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई निकै ठूलो सफलता दिलायो । तर, यो फिल्मका कारण अमिताभले जुन समस्या भोगेका छन्, त्यसले उनको जीवनलाई थप समस्यामा धकेल्यो ।
यो फिल्मको एउटा दृश्यमा अभिनेता पुनित इस्सरले अमिताभको पेटमा पन्च हान्छन् । फिल्ममा यो सिन अत्यन्त सहज देखिन्छ तर सुटिङमा यही सिनका कारण अमिताभको जीवनमा समस्या सुरु भएको थियो । किनकि यो पन्च यति तेज थियो कि त्यसले अमिताभको शरीरमा निकै रगत बगेको थियो । त्यो पनि इन्टर्नल ब्लिङिङ ।
उनलाई तत्काल मुम्बईको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ उनलाई ६० बोतल रगत चढाउनु परेको थियो । तर, यही क्रममा एउटा लापरबाही पनि भयो ।
एक व्यक्तिको हेपटाइटिस बी संक्रमित रगत अमिताभ बच्चनलाई दिइयो । यसैका कारण अमिताभले जीवनभर दुःख पाए । यही रगतका कारण अमिताभलाई लिभर सिरोसिस भयो । सन् २०१२ मा त अमिताभको लिभर कति बिग्रियो भने त्यसको ७५ प्रतिशत भाग काटेर फाल्नु पर्ने भयो । त्यसैले अहिले अमिताभ २५ प्रतिशत कलेजोमा बाँचिरहेका छन् । त्यसपछि अमिताभ शाकाहारी भए ।
विराज भट्टको ‘साङ्लो’ ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं – एक्सन स्टार विराज भट्टको कमब्याक फिल्म ‘साङ्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्म हलमा केही समयदेखि नै प्रदर्शन गरिएको ट्रेलर सबैका लागि आज सार्वजनिक गरिएको हो । शुक्रवार …
काठमाडौं – एक्सन स्टार विराज भट्टको कमब्याक फिल्म ‘साङ्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्म हलमा केही समयदेखि नै प्रदर्शन गरिएको ट्रेलर सबैका लागि आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
शुक्रवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको थियो । ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा विराज भट्ट, निकिता चण्डक लगायतको उपस्थिति थियो ।
पूर्वमिस नेपाल समेत रहेकी निकिता चण्डकको डेब्यु फिल्मका रुपमा लिइएको ‘साङ्लो’ मा जयनन्द लामा, कामेश्वर चौरासिया, प्रकाश शाह, आरपी पन्त, लय संग्रौला लगायतका कलाकारको अभिनय छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा भरपूर एक्सन देख्न सकिन्छ । ट्रेलरमा विराजलाई एक्सन अभिनेताका रुपमा देखाएको छ ।
मानकृष्ण महर्जनले खिचेको यो फिल्मलाई शिवम् अधिकारीले लेखेका छन् भने निर्देशन विराज भट्टले गरेका हुन् । निर्देशक भट्टकै लगानी रहेको ‘साङ्लो’ आउँदो माघ २४ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ ।
‘विवाह गर्ने बित्तिकै नायिकालाई हेला गर्छन्, हामीलाई खेलाउँदा फिल्म चल्दैन रे’
काठमाडौ । नायिका रेजिना उप्रेती अहिले चलचित्रमा भन्दा बढि चलचित्र कलाकार संघको काममा बढी व्यस्त रहेकी छिन । केहि समय अघि नायिकाहरुको सम्मानका लागि भव्य कार्यक्रम समेत आयोजना गरेकी थिईन । …
क्यानाडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै रेजिना उप्रेतीले आफु चलचित्रबाट हराएको छैन बरु आफु कलाकार भएर योगदान गरिरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । रेजिना भन्छिन, “मैले चलचित्र नखेले पनि म चलचित्र छेत्र मै योगदान गरिरहेको छु । नेपालमा कन्टेन्टमा भन्दा नायिकामा जोड
दिने भएर विवाह भएका नायिका लिंदा चलचित्र चल्दैन भनेर हामीलाई चलचित्रमा लिदैनन् । यहाँ विवाह भएका नायिकालाई बिर्सिएर नया नया नायिका खोज्ने चलन छ जुन भविष्यलाई राम्रो होईन । हाम्रो योगदानको पनि कदर गर्नुपर्छ त्यसैले हामीलाई लिएर राम्रो कन्टेन्टको साथ चलचित्र बनाउनु पर्ने हो तर यहाँ नया नायिका मात्र खोज्ने चलन छ ।”
चर्चामा नेहा कक्कड र आदित्य नारायण झाको विवाह
भारतीय चर्चित गायिका नेहा कक्कड यतिबेला ‘इन्डियन आइडल-११’को निणार्यकका रूपमा रहेकी छिन्। उनी आइडल-११ काे सेटमा विभिन्न कारणबाट चर्चामा आइरहेकी छिन्। कहिले प्रतियोगीको कथा सुनेर त कहिले प्रतियोगिको प्रतिभा देखेर खुसीले …
भारतीय चर्चित गायिका नेहा कक्कड यतिबेला ‘इन्डियन आइडल-११’को निणार्यकका रूपमा रहेकी छिन्। उनी आइडल-११ काे सेटमा विभिन्न कारणबाट चर्चामा आइरहेकी छिन्।
कहिले प्रतियोगीको कथा सुनेर त कहिले प्रतियोगिको प्रतिभा देखेर खुसीले रोइरहेकी हुन्छिन्। यसैबीच कक्कड नयाँ विषयबाट चर्चामा आएकी छिन्।
विषय हो, उदितनारायण झाका छोरा आदित्य नारायण झासँग नेहा कक्कडको विवाह चर्चा।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख भएअनुसार अबको एपिसोडमा उदित नारायण र गायिका अल्का याग्निक कार्यक्रम सेटमा पुग्नेछन्, जहाँ होस्ट आदित्यको नाम जोडेर बुबा उदित नारायणले नेहालाई जिस्काउँछन्।
स्रोतमा उल्लेख गरिएकाे छ- उदित नारायण र पत्नी दीपा झा, यसअघिको एपिसोडमा पनि सहभागी थिए, जहाँ उनीहरूले गायिका कक्कडलाई नारायण खानदानको बुहारी बनाउने कुराकानी गरेका थिए। कार्यक्रम सेटमा नारायण परिवार मात्र नभई कक्कडको परिवार पनि आएको र दुई परिवारबीच सम्बन्ध बढाउन राजी भएका छन्।
उल्लिखित विषय समावेश गरिएको कार्यक्रमको सुटिङ सकिएको र चाँडै नै प्रसारणमा आउनेछ।
यद्यपि कक्कड र आदित्यबीच यथार्थ विवाहका लागि तयारी चलिरहेको हो वा कार्यक्रमको एक हिस्साका लागि मात्र यो नाटक रचिएको हो त्यो भने खुलेको छैन।
हरेक एपिसोडको सेटमा होस्ट आदित्य निर्णायक कक्कडलाई विभिन्न तरिकाबाट जिस्काइरहेका हुन्छन्। यसले गर्दा कार्यक्रमको हिस्सा हो वा विवाहको चर्चा हो, यो विषयमा भने नेहाको जवाफ कुर्नुपर्ने हुन्छ।
यता गायिका नेहाको भने केही समय अघि हिमान्स कोहलीसँगको ब्रेकअप भइसकेको छ। त्यसपछि नेहाले लामो समय प्रेमवियोगमा बिताएकी थिइन्।
पारस शाहको पैसाको लागि उनको पछि हिंडेकी होईन : सोनीका रोकाया (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौ । पूर्व राजकुमार पारस शाह र युट्युवर सोनीका रोकाया बीचको सम्बन्धलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै गसिप भइरहेका छन् । सोनिकाले पारसलाई लिएर कार्यक्रम नै बनाउने र पारस जहाँ गयो त्यहाँ …
काठमाडौ । पूर्व राजकुमार पारस शाह र युट्युवर सोनीका रोकाया बीचको सम्बन्धलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै गसिप भइरहेका छन् । सोनिकाले पारसलाई लिएर कार्यक्रम नै बनाउने र पारस जहाँ गयो त्यहाँ सोनिकालाई पनि देखिन थालेपछि गसिप बन्न थालेको हो । साथै उनीहरुको केही ब्यवहारले पनि गसिपलाई मलजल दिएको छ ।
सोनिकाले पारससंग भएको गोप्य च्याट म्यासेज पनि सार्वजनिक गर्ने र अन्नपुर्ण वेस क्याम्प देखि पोखरासम्म उनीहरुको भ्रमणको भिडियोले पनि गसिप बन्न मद्यत गरेको छ । साथै उनीहरुको टिकटक भिडियोले पनि चर्चा पाएको हो । जब पारस शाह सोनीकाको क्लबको उदघाटनमा पुगे, यी दुई बिचको गसिप बन्न थाल्यो र जब पारसले सोनीकालाई लिएर मनाङ्ग सम्म घुम्न पुगे, धेरैले आ(आफ्नो तरिकाको अनुमान लाउन थाले ।
सोनीका रोकायाले दुर्गेश थापासंग एउटा गितको भिडियोमा मोडलिङ्ग गरेकी छिन् । उक्त गितको शुटिङ्गको क्रममा सोनीकाले क्यानाडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै पारस शाहसंग आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गराउनेहरु माथि आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरिन् । आफु सानै देखि दुख पिडा सहदै संघर्ष गर्दै यो स्थान सम्म आईपुगेको कुरा उनले स्पष्ट संग भनेकी छिन् ।
सोनीका रोकाया भन्छिन्, ूम यो जाडोमा दुर्गेश थापासंग गितको भिडियोमा डान्स गरिरहेको छु र यो गर्नुको कारण पैसा कमाउन हो । यदि म पारस शाहको पैसाको लागि कुदेको भए यो जाडोमा किन यति दुख गर्थे होला रु पारसको पैसाको लागि सोनीकापछि परेको भन्नेहरुले पहिला मेरो ईतिहास बुझे राम्रो हुन्थ्यो । हुन त मलाई अरुले जे भनुन मतलब त छैन तर त्यस्ता अबुझ व्यक्तिहरुले हेरुन कि सोनीका पैसाको लागि अरुको पछि लाग्दैन बरु मेहेनत गरेर पैसा कमाउन सक्ने आँट भएकी केटि हो ।
यस कारण करिना कपुरले बिपाशा बसुलाई हानिन् थप्पड
पुस २२, भारत । फिल्म उद्योगमा थुप्रै सेलिब्रिटी रातारात स्टार बन्ने गर्छन् त कोही हिट भइसकेपछि पनि अचानक हराउने गर्छन् । आज एक यस्ती नायिकाको जन्मदिन हो जसले मोडलिङबाट आफ्नो करियरको …
पुस २२, भारत । फिल्म उद्योगमा थुप्रै सेलिब्रिटी रातारात स्टार बन्ने गर्छन् त कोही हिट भइसकेपछि पनि अचानक हराउने गर्छन् । आज एक यस्ती नायिकाको जन्मदिन हो जसले मोडलिङबाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन् र हेर्दा हेर्दै बलिउडकी चर्चित नायिकामध्ये एक बनेकी थिइन् ।
तर आज उनलाई खासै फिल्महरुमा देख्न पाइँदैन । करणसिंह ग्रोवरसँग विवाह गरेपछि उनी आफ्नो नीजि जीवनमा नै व्यस्त छिन् । उनी हुन् नायिका बिपाशा बसु । बिपाशा बसुले फिल्म अजनबी (सन् २००१) मा अभिनयको सुरुवात गरेकी थिइन् । अजनबीमा बिपाशा बसुसँग करिना कपुर मुख्य भूमिकामा थिइन् ।
साथै, अक्षय कुमार र बबी देओल पनि नायकको रुपमा मुख्य भूमिकामा थिए । तर उक्त फिल्मको सेटमा जे भयो त्यो आजसम्म पनि याद गरिन्छ । करिना कपुर र बिपाशा बसुको फिल्मको सेटमै झगडा भएको थियो । भारतीय मिडियामा सार्वजनिक भएका खबरलाई मान्ने हो भने उनीहरुबीचको झगडा यति धेरै बढेको थियो कि करिना कपुरले बिपाशा बसुलाई थप्पडसमेत हानेकी थिइन् ।
फिल्म अजनबीको सेटमा करिना कपुरको डिजाइनर विक्रम फडनीसले बिपाशा बसुलाई मद्दत गरिरहेका थिए । यो देखेर करिना यति रिसाएकी थिइन् कि बिपाशालाई कालो बिरालोसमेत भनेकी थिइन् ।
बिपाशाले सन् २००१ मा फिल्मफेयरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यसबारे यसो भनेकी थिइन्, ‘मलाई लाग्छ कि यसलाई तिलको पहाड बनाइएको हो । यदि करिनालाई डिजाइनरसँग समस्या थियो भने मलाई बीचमा किन तानिन् ? त्यो साँच्चै नै करिनाको अपरिपक्व व्यवहार थियो । म अब करिनासँग दोस्रो पटक कहिले पनि काम गर्ने छैन ।’
करिना कपुरले पनि यसबारे फिल्मफेयरसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । सन् २००२ मा दिएको उक्त अन्तर्वार्तामा करिनाले भनेकी थिइन्, ‘मलाई लाग्छ कि बिपाशालाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन । उनले चार पानाको अन्तर्वार्तामा करिब तीन पाना मेरै बारे कुरा गरेकी छिन् । उनले आफ्नो कामबारे किन कुरा गरिनन् ? मलाई लाग्छ बिपाशाले अहिलेसम्म जति पनि लोकप्रियता पाएकी छिन् त्यो ‘अजनबी’ को सेटमा डिजाइनर विक्रम फडनीसको विषयमा मसँग भएको झगडाका कारण नै पाएकी छिन् ।’
यद्यपि, सन् २००८ मा करिना कपुरले सबै बिर्सिएर बिपाशालाई सैफ अली खानको जन्मदिनको पार्टीमा आमन्त्रण गरिन् । त्यतिबेलादेखि यी दुईबीचको झगडा समाप्त भयो र दुबैलाई विभिन्न पार्टीमा सँगै देखिएको छ । एजेन्सी
कमला घिमिरे र अमृत सापकोटाले गाएको चिया छानेको गीत करोडमा पुग्दै,कहिले आउदै छ भाग दुइ ?भिडियो
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा अर्को इतिहास रच्ने तयारीमा रहेको करोडौको क्लबनजिकै प्रबेस गर्दै गरेको चिया छानेको गीत यो समय निकै चर्चामा छ ।उक्त गीत यो समय ९८ लाख दर्शकले हेरिसकेका छन।शुभारम्भ …
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा अर्को इतिहास रच्ने तयारीमा रहेको करोडौको क्लबनजिकै प्रबेस गर्दै गरेको चिया छानेको गीत यो समय निकै चर्चामा छ ।उक्त गीत यो समय ९८ लाख दर्शकले हेरिसकेका छन।शुभारम्भ डिजिटल मार्फत शम्भु कुँवरको प्रस्तुतिमा बजारमा आएको उक्त गीतमा अमृत सापकोटा र कमला घिमिरेले आवाज भरेका छन।
यो समय कमेडी च्याम्पियन देखि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउदै गरेको रंगशाला सम्म यही गीतको दैनिकी चर्चा हुने गर्छ।यसको भाग दुईको प्रतिक्षामा समेत छन दर्शक दर्शकको मन जितेको उक्त गीत करोडको क्लबमा पुगे संगै नया घोषणा हुने निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ।हेरौ भिडियो फेरी एक पटक :
‘मलाङ’ को ट्रेलरमा आदित्य र दिशाको यस्तो रोमान्टिक सिन, भिडियो
एजेन्सी – अभिनेता आदित्य रोय कपुर र दिशा पटानीको नयाँ फिल्म ुमलाङु को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता आदित्य रोय कपुर, दिशा पटानी र अनिल कपूरको मुख्य भुमिका रहेको यस …
एजेन्सी – अभिनेता आदित्य रोय कपुर र दिशा पटानीको नयाँ फिल्म ुमलाङु को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता आदित्य रोय कपुर, दिशा पटानी र अनिल कपूरको मुख्य भुमिका रहेको यस फिल्मको ट्रेलर सोमबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो । ट्रेलरमा आदित्य रोयको एक्सन देखाइएको छ ।
ट्रेलरमा आदित्य र दिशाको रोमान्टिक सिन पनि देखाइउको छ । फेब्रुअरी ७ मा रिलिज हुने तयारीमा रहेको यस फिल्ममा अनिल कपूर पुलिसको भूमिकामा देखिएका छन् । मोहित सुरीले निर्देशन गरेको यस फिल्म दर्शकले रुचाउने अपेक्षा गरिएको छ । केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको यस फिल्मको ट्रेलर पनि दर्शकले रुचाएका थिए ।